Iyi ndiyo pfungwa yakanakisa kusvika nhasi yeIOS 13 ye iPad | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | | iOS 13, Noticias
ari kutanga mimvuri iOS 13 inoonekwa paInternet. Kune atovepo midhiya akati wandei aona mune yavo manhamba kuvepo kwemidziyo ine ino inoshanda sisitimu yekuvhura mawebhusaiti avo. Nekudaro, Apple haizoburitse chero ruzivo nezve ayo mashandiro masisitimu kusvikira WWDC 2019 zvichaitika mumwedzi waChikumi.
Pfungwa iyi yakaburitswa naLéo Vallet inoratidza maitiro aungaite kugadzirisa iyo iPad nharaunda neIOS 13. Pfungwa yacho inoedza kuratidza kuti iyo iPad inofanira kuve mumwezve mubatsiri weMac, pane kuyedza kutsiva. Mushure mekusvetuka tinokuratidza nhau huru dzeiko kwandiri ndiyo pfungwa yakanakisa yeIOS 13 kusvika zvino.
iPad uye iOS 13: synergy yakavakirwa pane zvishandiso uye mashandiro
Imwe yemabhuku makuru eiyo iOS 13 pfungwa yakaburitswa na Vallet ndiyo chishongedzo kusangana uye kugarisana kubva kuApple. Izvi zvinongedzo zvinosanganisira iwo Magic Keyobard uye iyo Mouse Mouse. Kutenda machipisi akabatanidzwa neapuro hombe, kubatana pakati pemidziyo miviri hakufanirwe kunge kuri dambudziko, uye yaizoratidza zvakwakanakira kupfuura zvakaipira, kunyanya kushandisa mashandiro nekuoma kukuru kana zvasvika pakuyerera kuburikidza navo.
Pamusoro peiyi hwaro, zvinoratidzwawo mune pfungwa kuti iyo iPad inogona kunge iri yekuwedzera yekuratidzira kune Mac, mune ino kesi. Isu tinoona kuti iOS 13 ingakubvumidza iwe kubatanidza iyo iPad skrini kune Mac kufambiswa kwemabasa kuitira kuti uve neruzivo rwekuwedzera uye rwakakosha kubva kuzvirongwa zvakakosha seFinal Cut Pro uye Xcode.
Chimwe chinhu chandakawana chinonakidza ndicho kusanganiswa kweControl Center neMultitasking. Iyi pfungwa yakatenderera kazhinji pakati pemafungiro akasiyana enetiweki, zvisinei, zvakaedzwa nenzira dzese kuti mabasa ese akabatanidzwa kune ese iPhone neiyo iPad. Screen yekupedzisira inobvumira iyo chaiyo fusion yezvishandiso zviviri. Neswipe imwechete, tinogona kuve neDirect Center mapfupi uye kudzima zvinoshandiswa kumashure, hapana chikonzero chekuita chiratidzo chechipiri kuvhura multitasking. Chinhu chakanaka pamusoro peiyi pfungwa ndechekuti Vallet yakwanisa kurerutsa zano zvakare kune iyo iPhone, iyo yatinogona kuita zviito zvakafanana zvandatsanangura pamusoro asi pachiratidziro cheiyo iPhone. Ichokwadi kuti pamwe iyo iPhone X zvichienda kumberi ingangodaro ichizowana chinhu ichi sezvo vaine chinovhara chakati wandei chingangove neruzivo rwakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyi ndiyo pfungwa yakanakisa kusvika nhasi yeIOS 13 yePadad
Idzo gadziridzo dzakanaka kwazvo, asi basa rakakosha rinofanirwa kuitiswa mu ipad pro 2018 ndiko kuvhurirwa kwekutamisirwa kwemafaira makuru ne USB tanda kuburikidza neiyo USB-c yekuisa.
Izvo zvaizounza chishandiso ichi padhuze neMacs